Ukubukela Iividiyo Kwi-Intanethi | ITV.JW.ORG | Imiyalelo
Izinto Onokuzenza KwiJW Broadcasting
I-JW Broadcasting Kwi-Intanethi
Bukela Iividiyo Ku-TV.JW.ORG
Bukela Oovimba Beevidiyo KwiTV.JW.ORG
Mamela Ezirekhodiweyo KwiTV.JW.ORG
Indlela Yokutshintsha Iisetingi Kwikhompyutha, Kwitablet Okanye Kwifowuni
Imibuzo Abantu Abaqhele Ukuyibuza​—IJW Broadcasting (Kwi-intanethi)
I-JW Broadcasting KwiRoku
Bukela Oovimba Beevidiyo kwiRoku
Ukumamela Isandi KwiRoku
Imibuzo Abantu Abaqhele Ukuyibuza​—IJW Broadcasting (KwiRoku)
Imibuzo Abantu Abaqhele Ukuyibuza​—IJW Broadcasting (KwiApple TV)
IJW Broadcasting Iyadlala KwiTV YeAmazon Fire
Imibuzo Abantu Abaqhele Ukuyibuza​—IJW Broadcasting (KwiFire TV)
Indawo ethi Ezidlalayo ku-tv.jw.org iphantse yafana nomabonwakude kuba inezitishi eziliqela. Khetha eso sitishi usifunayo ukuze ubukele oko kudlalayo ngelo xesha. Ukuba ufuna ukuyilawula ividiyo (njengokuyimisa, ukuyibuyis’ umva, ukuyisa phambili), ungaya kwindawo ethi Oovimba Beevidiyo.
Landela le miyalelo xa:
Ukhetha Isitishi Esahlukileyo Ngekhompyutha Okanye NgeTablet
Ukhetha Isitishi Esahlukileyo Ngefowuni
Ufuna Ukubona Iziqulatho Zezitishi
Cofa indawo ethi Ezidlalayo. Kuza kuvela isitishi esidlalayo yaye kuza kudlala loo vidiyo ibicwangciselwe elo xesha.
Ukuze ubukele ividiyo uze uyibone iphelele, thatha imawusi uze uyidlulise phezu kwevidiyo, uza kubona indawo yokwenza Isikrini Sivele Kakhulu omele uyicofe.
Ukuze uyenze iyeke ukuvela kakhulu, cofa indawo ethi Esc. okanye ususe imawusi kwividiyo, uze ucofe indawo yokuyenza Ibonakale Ngokuqhelekileyo.
Tshintsha ubukhulu beskrini ngokuba uthathe imawusi yakho uze uyihambise phezu kwaloo vidiyo wandule ucofe indawo ethi Iisetingi Zevidiyo. Cofa kobo bukhulu ubufunayo. (Qaphela: Ayizizo zonke iindlela zokuvula ividiyo ezinayo le ndawo.)
Qaphela: Inani elikhulu lithetha ukuba ividiyo iza kuba kumgangatho ophezulu, loo nto ifuna ube neintanethi ekhawulezayo. Khetha leyo iza kulungela isantya seintanethi nobukhulu beskrini. (Ukuze ufumane ezinye iinkcukacha, bona indawo ethi Tshintsha Iisetingi kwikhompyutha okanye kwifowuni yakho.)
Ukuze utshintshe isandi, thatha imawusi uyise kwividiyo, uze uyise kwindawo yokutshintsha Isandi. Ukuze utshintshe isandi, hambisa imawusi kwividiyo edlalayo, uze ucofe kwindawo yesandi.
Cofa indawo ethi Dlala Ukususela Ekuqaleni ukuze uvale isitishi uze ubone iividiyo ezikhoyo kwindawo ethi Oovimba Beevidiyo.
Icebiso: Yiya kwiisetingi ukuze ulawule isitishi ofuna ukuba sivuleke kuqala xa ucofa indawo ethi Ezidlalayo.
Ukuba ubukele isitishi esinye kangangethuba elide, kuza kuvela umyalezo oza kubuza ukuba usabukele kusini na. Isizathu sokuba kwenziwe oku kukuba, kubiza imal’ eninzi ukubukela nasiphi na isitishi, ngoko yindlela yokuqiniseka ukuba akukho mntu ubukeleyo. Ukuba usabukele cofa indawo ethi OK.
Qaphela: Kukho umahluko nje omncinane xa usebenzisa iifowuni ekubeni izikrini zingalingani. Nazi ezinye zezinto ezahlukileyo.
Kwizixhobo ezinkudlwana ezinjengetablet, uqala ngokucofa indawo ethi Ezidlalayo. Kuza kwandula kudlale enye yeenkqubo.
Kwisixhobo esincinane esinjengefowuni, cofa indawo yokusenza siveze amacandelo akhoyo. Wandule ucofe elithi Ezidlalayo ukuze kudlale enye yeenkqubo okanye usenokucofa Umgca Okhombe Ezantsi uze ukhethe isitishi ofuna ukusibukela.
Cofa indawo ethi Dlala ukuze uqalise ukubukela.
Ukuze ividiyo uyidlale kwiskrini sonke cofa kuyo kabini okanye ucofe umfanekiso oza kuvula iskrini sonke.
Qaphela: Xa iskrini sivele sonke, ezi ndawo (ukuma, ukudlala, ukuya phambili, ukubuyela umva) azinakucofeka.
I-iOS: Xa ufuna ukuvala iskrini esikhulu, cofa kwividiyo uze ucofe kwindawo yokuyenza Ivele Ngendlela Eqhelekileyo.
IAndroid: Xa ufuna ukuvala iskrini esikhulu, cofa kwividiyo uze ucofe iqhosha Lokubuyela Umva.
Isixhobo seWindows: Xa ufuna ukuvala iskrini esikhulu, cofa iqhosha Lokubuyela Umva.
Ukuze utshintshe ubukhulu bevidiyo, cofa kwividiyo uze uye kwindawo ethi Iisetingi Zevidiyo. Khetha ubukhulu ubufunayo. (Qaphela: ayizizo zonke iifowuni ezikwenzayo oku.)
Qaphela: Inani elikhulu lithetha ukuba ividiyo iza kuba kumgangatho ophezulu, loo nto ifuna ube neintanethi ekhawulezayo. Khetha eyona ndlela eza kukusebenzela. (Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi yiya kwindawo ethi Tshintsha Iisetingi kwikhompyutha okanye kwifowuni yakho.)
Ukuze ubone inkqubo elandelayo, cofa kwindawo yokwenza ubone elandelayo. Kwifowuni encinane, le ndawo uyifumana ngokuyikhangela ezantsi.
Ukuze ubukele iividiyo ezidlala kwindawo ethi Oovimba Beevidiyo Cofa indawo ethi Dlala Ukususela Ekuqaleni.
Icebiso: Ukuze ulawule isitishi esimele sivuleke kuqala umele uye kwindawo ethi Iisetingi.
Khetha Isitishi Esahlukileyo Kwikhompyutha Okanye Kwitablet
Xa ividiyo idlala kwisikrini esiqhelekileyo, kuye kuvele uludwe lwezitishi ezikhoyo ezantsi kwevidiyo. Cofa eso sitishi usifunayo yaye siza kuvela.
Kwikhompyutha okanye kwitablet izitishi ezikhoyo ziye ziboniswe ezantsi kweskrini. Isitishi esidlalayo sibonakala ngomgca oluhlaza olapha ezantsi kwaso.
Ukuze ubone ezinye izitishi ezikhoyo ungacofa imigca ekhombe ekunene okanye ekhohlo. Cofa umxholo weso sitishi ukuze uqalise ukusibukela.
Isitishi esikhethiweyo ekhompyutheni sidlala ngoko nangoko. Kwizixhobo ezisebenzisa i-iOS neAndroid kufuneka ucofe iqhosha elithi Dlala ukuze sidlale.
Ukukhetha Isitishi Esahlukileyo Efowunini
Xa ifowuni imiswe ngobude, kube kudlala esinye sezi zitishi, iividiyo zidwelisiwe. Isitishi esidlalayo ngelo xesha sibonakala ngomgca oluhlaza entla kwegama laso. Ukuze ubone oko kudlalayo kweso sitishi cofa Umgca Okhombe Ezantsi. Ukuze ubone iividiyo eziza kudlala namaxesha eziqala ngawo zijonge ngokulandelelana kwazo.
Cofa Umgca Okhombe Phezulu ukuze uvale ezo zidwelisiweyo.
Cofa umxholo waloo vidiyo ukuze ukhethe yona, emva koko ucofe indawo ethi Dlala ukuze udlale ividiyo oyikhethileyo.
Funda Kwindawo Ethetha Ngoncedo Lwezitishi
Kwikhompyutha okanye itablet, Indawo Ethetha Ngoncedo Lwezitishi iyabonakala kodwa (ayiveli kakhulu). Ukuba usebenzisa isixhobo se-elektroniki esincinci, njengefowuni, khetha isitishi kwifowuni yakho.
Cofa Kwindawo Yokubona Izitishi ukuze ubone ezidwelisiweyo nezo ziseza kudlala.
Elandela emva kwenye imela isitishi. Ividiyo edlalayo kwisitshi ivela kuqala kunezinye. Ezilandelayo, ixesha ezilithathayo nelo zidlala ngalo zidweliswe ngezantsi.
Cofa Umgca Okhombe Ekhohlo okanye Okhombe Ekunene ukuze ubone uludwe lwezitishi. Cofa kwisitishi ukuze ususe indawo ebonisa izitishi nokuze uye kwisitishi osikhethileyo.
Qaphela: Ixesha eziqala ngalo iividiyo libhalwe ngendlela evumelana nexesha elisetyenziswa kwindawo okuyo (oko kukuthi, ixesha elikwikhomyutha okanye isixhobo se-elektroniki obukele kuso). Le nto ithetha ukuba abantu abafuna ukubukela ividiyo enye ngexesha elinye abayi kukwazi. Ngokomzekelo, ukuba ubukele ividiyo ngentsimbi yesixhenxe, umntu okwimpuma obukele kwale vidiyo ngentsimbi yesixhenxe, ebeyibukele kwiyure edluleyo ngokwexesha lendawo akuyo. Umntu okwintshona uza kuyibukela sele kudlule iyure emva kwexesha obuyibukele ngalo wena, xa ixesha iyintsimbi yesixhenxe nakwindawo ahlala kuyo.
Cofa Kwindawo Yezitishi kwakhona ukuze zicime kuze kuvele ividiyo.
Bukela Usasazo Lwe-JW Kwi-intanethi